Madaxweynaha maamulka Puntland oo booqday degmada Eyl (Sawirro) – Radio Muqdisho
Madaxweynaha maamulka Puntland oo booqday degmada Eyl (Sawirro)
Madaxweynaha maamulka Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo shalay booqasho ku tagay degmada Eyl ee Gobolka Nugaal ayaa kormeeray cisbitaalka degmadaasi, isagoo kulan la qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada
Cabdi weli Gaas ayaa meel fagaare ah kula hadlay qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmadaasi, kuwaasi oo isaga kala yimi laba xaafadood ee ay ka kooban tahay degmada Eyl, xaafadahaasi oo kala ah Daawad iyo Badey.
Haweenka degmada Eyl ayaa soo bandhigay heeso, buraanbur iyo ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee Soomaalida, taasi oo ay ku soo dhaweynayeen madaxweyne Gaas iyo wafdiga uu hogaaminayey.
Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in uu si aad ah ugu faraxsan yahay soo dhaweynta loogu sameeyey degmadaasi Eyl iyo booqashada uu ku tegay Degmadaasi.
”Qofka marka la yiraahdo magaalada Eyl waxaa maskaxdiisa ku soo dhacaysa in ay tahay magaalo aad u quruxbadan dhulka ay ku taalo iyo sida uu u egyahay, magaalo bad, buuro, berri magaalo intaa leegna soomaaliya way ku yartahay”Ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
Madaxweyne Gaas ayaa qurbojoogta reer Puntland ugu baaqay in dalkooda kheyraadka ku jira ka faa’iidaystaan isalamrkaana u dalxiis yimaadaan meelaha taariikhiga ah sida Eyl ee ku haboon in lagu dalxiiso.
”Waxaan rabnaa in laysku tashado maadaama laysku tashanayo waa muhiim in maamulka iyo dadkiisa ay isku tashadaan si wax loo wada qabsado, waxaan rabnaa 80-kiilo mitir ee ka harsan wadada in si tartiib tartiib ah aynu ku dhamaysano”Ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
Dhageyso warka subax ee Radio Muqdisho 01 01 2015
“Muungaab” oo ka qeybgalay Xaflad xalay ka dhacday Degmada Yaaqshiid (Sawirro)